I-electroshock "i-Interskol R-110-01" iyithuluzi elilula futhi eliphephile. Umklamo wayo uhlangabezana nazo zonke izindinganiso zekilasi lobuchwepheshe. Ithuluzi liyakwazi ukubhekana nemithwalo esindayo futhi isikhathi eside ukusebenza ngaphandle kokuphazamiseka. Le indiza enamandla iklanyelwe ukuphatha izinkuni ezinkulu. Zingasetshenziselwa ukuhlela izinhlobo eziningi zezihlahla ekujuleni okukhulu ngokwanele.
Isibambo sangaphambili sikhululekile kakhulu, kukhona izinkinobho zokulungisa kulo, kufaka phakathi ukujula. Uma ijikelezwa, i-front kuphela iphakanyiswa noma iyancipha. Isembozo sangemuva sefomu ekhonjiwe ifakwe obturator elithambile yerabha. Le pad yenza ukuba ithuluzi lithembeke futhi liqiniseke ngokwengeziwe. Ohlangothini oluhlangothini lwesibambiso sangemuva kuyinkinobho ejikelezayo, eyenzelwe ukuvikela ekuqaliseni kwengozi kwemivese. Lokhu kwandisa ukuphepha kokusebenza, kodwa kunzima ukulungisa isimo esicindezelwe endaweni ephikisiwe. Le nkinga ixazululwa ngokusebenzisa "isihlangu" esikhethekile esiza nekithi. Le ndlela ye-ergonomics inikeza insimbi echazwe ezinye izinzuzo "osebenza naye" - i-Electrolank "Interskol P-102" - inqatshelwe.
Umodeli uneskrini esivikela isikhukhula, esenza ukusebenza kwethuluzi kube ephephile ngangokunokwenzeka. Esimweni esingasebenzi, imivimbo yemigodi ihlale ivaliwe, kodwa ngaphansi kwethonya lomsebenzi ukuvikelwa kuya kuhlangothi.
Iningi lezindiza lihlela ukuphakama kwamamitha ayi-82, isigaba samathuluzi esingajwayelekile kakhulu sikwazi ukucubungula amamitha ayi-100 kudlule. I-Electroshock "i-Interskol 110-01" ingakwazi ukuqonda amamitha ayi-110, i-one thousandth motor of the thuluzi ikuvumela ukuthi ihlangabezane ngokuzethemba ngokuplanyiswa kwezindawo ezinzulu. Kwabalimi abanamandla, izinga liyi-blade ebanzi eyenziwe nge- high speed speed, okuvumela ukuba ususe ungqimba obukhulu lwezinkuni. Izinto eziphathwe ngendiza, ezibushelelezi, ngaphandle kokuncipha okuncane kakhulu, zigcinwe kahle ngaphandle kokugqoka okuvikelayo.
I-Electroshock "i-Interskol Р 110-01" ifakwe izigxobo eziqinile neziqinile eziqinile, ngenxa yokuthi ithuluzi lithembeke ngokuqinile emsebenzini, ngaphandle kokuphazamiseka nokuthambekela okungenzeka. Ama-chips asetshenzisiwe aphonswa ngaphandle kwefasitela elikhethekile lokudonsa eliseceleni kwe-casing. Uma usebenza ekamelweni lapho kungathandeki ukuchitha khona , ungafaka ingxube yokulungisa i-screw emibili eyoqoqa imithwalo yemfucuza. Ungakwazi ukuxhuma kokubili isikhwama sothuli kanye nephasi le-vacuum cleaner ku-buzz.
Ithuluzi linikezwa ngokuphelele ngokuma kokufakwa okumile. Ku-electrobranch yakhe "i-Interskol R 110-01" ifakwe / isusiwe ngomzuzu. Okokuqala udinga ukukhipha isisindo bese ususa i-rack ngokuvikelwa, bese udinga ukukhipha izikrini ezimbili ezilungisa ingxenye yokugcina yethuluzi. Ngemuva kwalokho, udinga kuphela ukususa isikrini kusuka ezithombeni ezisekela ngemuva - futhi ithuluzi likhululekile.
I-Electroshock "i-Interskol R 110-01" ingasuswa bese isetshenziselwa ukusebenza nezinsimbi ezisindayo. Ngokuplenga eceleni, isitoreji esifanayo sinikezwa ithuluzi, elinqunywe yisikrini esisodwa phambi kwezindlu. Ngenhla yindawo efana ne-V yokumemeza. Ngalo, i-angle yokucwenga inembile kakhulu, futhi inani lokudlulela eceleni komsebenzi liyanciphisa.
Ibhulashi lomgqomo - ithuluzi elibalulekile lomdwebo osebenzayo
Beluka iphephandaba amashubhu. Kuvunguza ukwelukwa amagoda ezimbali, isitsha sezimbali, isihlahla sikaKhisimusi
Amehlo Green-grey, incazelo kanye imfihlakalo